Samsung gosipụtara nyocha mbụ na teknụzụ QLED, curved na Thunderbolt 3 njikọ | Akụkọ akụrụngwa
Na Jenụwarị 9 na ruo ụbọchị iri na abụọ, a na-eme mmemme ngosi teknụzụ kachasị mkpa nke afọ a, ngosi ngosi nke, dịka ọ dị na afọ ndị gara aga, ga-eme ọzọ na Las Vegas. Ma, dị ka ọ dị na mbụ, nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-ama ke obio, ma na-na-uru nke ụbọchị tupu CES, ka chee ụfọdụ n'ime ngwaahịa ndị ga-abata na afọ.
Couplebọchị ole na ole gara aga, anyị gwara gị banyere ngosipụta nke telivishọn mbụ nke 88, na mkpebi 8k na teknụzụ OLED, ịbụ onye nrụpụta izizi n'ụwa iji bido telivishọn nke mkpebi dị otu a, ogo ya na iji teknụzụ OLED. Ugbu a ọ bụ oge nke onye na-ama ya aka, Samsung, bụ onye dere teknụzụ OLED ozugbo ka ọ lekwasị anya na QLED, ọkọnọ a mbụ curved ileba anya na nke a technology.
Samsung CJ971 a na-enye anyị mkpebi nke anụ ọhịa 34, na-eji teknụzụ QLED, gbagọrọ agbagọ ma na-enyekwa anyị njikọ Thuderbolt 3, njikọ nke anyị nwere ike iru ntụgharị ntụgharị nke 40 GB kwa nkeji, 4 ugboro karịa USB 3.0 njikọ. Nyochaa a na-enyekwa anyị ike nke 85 w, yabụ anyị nwere ike iji ya jikọọ na laptọọpụ anyị na-eji ike ọ na-enye ka anyị wee na-eme anyị ga-enweta laptọọpụ zuru ezu.
Mkpebi nke nyocha a ruru 3.440 x 1.440, ọ na-enye anyị ohere nke 4ms, ezigbo maka ndị ọrụ ahụ chọrọ iji nyocha ọhụrụ a iji nwee ọ gamesụ egwuregwu kachasị amasị ha. Banyere ọnụahịa ahụ, ụlọ ọrụ Korea na-akpọ anyị òkù ịbịa n'ụlọ ntu ya na CES iji chọpụta ma ọnụahịa ya na ụbọchị ọ ga-ebupụta n'ahịa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Samsung gosipụtara nyocha mbụ na teknụzụ QLED, curved na Thunderbolt 3